Daaweynta Ilmo-xaaqista 10-13 Todobaad Xaamilo ah | HTU
Daaweynta Ilmo-xaaqista 10-13 Todobaad Xaamilo ah
Uurka u dhaxeeya 10-13 wiig wali waxaa loogu joojinkaraa si nabadqabta oo waxtar leh kiniinada ilmo xaaqista, lakiin waxa jira waxoogaa tixgalino lagu xisaabtamo.
Badqabka Daaweynata Ilmo Xaaqista ee Wiiga
Ilmo xaaqista dhacda wakhtiga hore ee uurku waxay leedahay khatar kooban oo adkaansho ah. Khatarta adkaanshu waxay la korodhaa korniinka uurka. Jaantuskan hoose ayaa muujinaya sida khatarta adkaanshu ula korodho mudada xaamilada. Inkastoon khatartu kor u kicin xaamilooyinka danbe, ilmo-xaaqista wiiga 13 waxa wali loo tixgaliyaa amaan.
Maxaad arki Doontaa Inta Lagu Jiro Ilmo-Xaaqista 10 Todobaad Kadib?
Daaweyn Ilmo-xaaqis waxay dumarka ku sababi doontaa in ay dhiigaan. Dhiigani wuxuu noqon karaa mid ka adag mudadaada caadiga ah waxaana ku jiri kara xinjiro. Waxa suurto gal ah in dumarka u dhaxeeya 10-13 todobaad oo xaamilo ah ay arkaan shay la aqoonsan karo, ama u eeg nude. Tani waa caadi manaaha in ay ku walaac galiso. Waa calaamad in ilmo-xaaqistu ay u socoto sidii la rajaynayey. Dhanka mudada adag, waxaad si nabad qabta ugu qubi kartaa xinjiro dhiiga ama nudo suuliga. Hadii aad ku nooshahay wadan ay ilmo-xaaqistu xaraan tahay, hubi inaad u qubto shaykasta oo la aqoonsan karo si taxadir leh oo sir ah.